Tag: daacad | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Dilaya Mawduucaaga Suuqgeynta #CONEX
Shalay waxaan la wadaagay inta aan ka bartay dhisida istiraatiijiyadda ABM ee CONEX, oo ah shir ka dhacaya Toronto oo ay la leedahay Uberflip. Maanta, waxay ka joojiyeen joogsigii oo dhan iyagoo keenay suuq-geyn kasta oo suuq-geyn ah oo warshaduhu bixin lahaayeen - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, iyo Scott Stratten si ay u magacaabaan inyar. Si kastaba ha noqotee, feejignaanta ma ahayn waxyaabahaaga caadiga ah sida loo-toosiyo iyo talooyinka. Waa ra'yigayga kaliya, laakiin doodda maanta ayaa ka sii badanayd
Arbacada, December 3, 2014 Khamiista, Diseembar 4, 2014 Douglas Karr
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan ka maqnaa magaalada mana aanan helin waqti badan oo aan ugu qoro qoritaanka waxyaabaha sida caadiga ah aan jeclaan lahaa. Halkii aan ka tuuri lahaa xoogaa farriimo nus dameer ah, waan ogaa inay xilliga fasaxa u ahayd aqristayaasheyda badankood sidoo kale waxaan si fudud u doortay inaanan qorin maalin kasta. Kadib toban sano oo qoraal ah, taasi waa nooca waxa igu waalan - qorista ayaa si fudud qayb uga ah
Suuqgeynta xilligan casriga ah waa wax qosol badan; halka ololeyaasha suuqgeynta ee ku saleysan websaydhku ay aad uga sahlan yihiin in lala socdo ololeyaasha dhaqanka, waxaa jira macluumaad aad u badan oo la heli karo oo dadka ku curyaami kara iyagoo raadinaya xog dheeri ah iyo 100% macluumaad sax ah. Qaar ka mid ah, qadarka waqtiga ee la kaydiyay iyadoo awood u leh inay si dhakhso leh u ogaato tirada dadka arkay xayeysiintooda internetka inta lagu jiro bil la diidey waqtiga